DODOCase Klasika mahazatra ho an'ny iPad | Vaovao IPhone
Notsapainay ny DODOCase Classic Case ho an'ny iPad
DODOCase Klasika mahazatra ho an'ny iPad
Vao tsy ela akory izay no nahazoantsika a Raharaha iPad amin'izay izahay afaka manao famerenana amin'ny Vaovao IPad. Saingy tsy miresaka momba ny fonony fotsiny isika fa ilay Tranga DODOCase Classic, vokatra manana kalitao avo indrindra izay hitantsika eo amin'ny tsenan'ny fonony feno ho an'ny takelaka Apple.
Ny zavatra voalohany miavaka amin'ity raharaha ity dia ny mikasika ny fitaovanao, satria tsy misy hafa amin'ny fonony sisa amin'ny tsena. Ny DODOCase Classic dia vita amin'ny akora voajanahary toy ny rongony sy volotsangana ary vita amin'ny tanana ny teknika tena mitovy amin'ireo fanao nentim-paharazana hamatotra boky. Mazava ho azy fa tsy fitoviana lehibe eo amin'ny teknolojia farany sy ny teknikan'ny androm-piainana.
Side of the DODOCase Classic Case
Raha hitantsika ety ivelany, dia manana ny fonony mitovy amin'ny boky misy fonony hoditra mainty sy fingotra matevina mitazona azy io. Raha vao jerena dia sarotra ny mahita fa misy iPad ao anatiny ary tsy tena fandaharam-potoana ...
Eto isika dia afaka mahita ny tranga misokatra tsy misy iPad
Ao anatiny misy a volavola volotsangana izay mitazona tsara ny iPad ary mitazona azy io ho mafy orina ary tsy afaka miaritra karazana kapoka. Mazava ho azy, omena azy ireo ny lavaka ilaina mba hahafahantsika miditra mora foana amin'ny bokotra rehetra, ary koa mampifandray ny headphones sy ny dock.
IPad amin'ny tranga eo amin'ny toerana misy azy
Araka ny hitanao amin'ny sary teo aloha dia vonona ny tranga hahafahana mametraka ny iPad ao a tontolo, zavatra tena ilaina raha te-hijery sary na sarimihetsika eo amboniny ianao. Ohatra, ampiasaiko matetika ato amin'ity toerana ity aho rehefa tsy maintsy manao fampisehoana any am-piasana ary tena ahazoana aina.
Toy izao ny fisehoan'ny iPad ao anatin'io tranga io
Ho famintinana farany dia afaka milaza isika fa miatrika tranga lehibe amin'ny fanombanana ankapobeny. Miaraka amin'ny fomba milamina sy ofisialy, ny fonony dia manome izay ilainao rehetra (fampiononana, fanoherana, fikasihana tsara, lanjany ambany) azonao angatahana fitaovana fanampiny amin'ity karazana ity. Nanjary nalaza noho izy io tranga io ny tanany nampiasan'i Obama; raha ny tena izy, ao amin'ny magazay an-tserasera DODOCase manokana no anondroan'izy ireo an'io noho io anecographe io. Ankoatr'izay, ny Curiosities dia tranga iray lehibe ary izany no mahatonga azy hahomby amin'ny ankapobeny any Etazonia ary indrindra any Silicon Valley.
Ny vidiny dia € 59 ary azonao atao ny mividy azy amin'ny tranokalan'ny gifter.
Avelako ho anao ny lisitr'ireo sary feno mba hahitanao azy amin'ny antsipiriany bebe kokoa.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPad » Notsapainay ny DODOCase Classic Case ho an'ny iPad
Tsy tiako na inona na inona ...
Remote 3.0, fehezo lavitra ny tranombokinao iTunes
Fantastical: kalandrie mahatalanjona ho an'ny iOS